Izinombolo zocingo kuzixhumanisi - ingozi yokuphepha?
Izinombolo Zocingo Ezixhumanisi - Ingabe Ziyingozi Yokuphepha?10
Emasontweni ambalwa edlule ngibike ukuthi ungazivumela kanjani izivakashi zakho ukuthi zivule uhlelo lokusebenza lwefoni kumadivayisi eselula ngokuthepha inombolo yocingo. Manje sekuvele ukuthi kungenzeka kube khona ukuvimba i-SIM khadi ngokungenakuphikiswa noma ukusetha kabusha izilungiselelo zemboni ngaphandle kwesenzo somsebenzisi.
Ngezixhumanisi ezikhethekile ezicashe cishe yonke indawo futhi ezingabizwa ngokuzenzakalela (izinkundla, ama-imeyili, i-SMS, amakhodi we-QR), ngokwesibonelo, i-PIN engalungile noma i-PUK ifakwa kaningi ngomzuzwana ohlukanisiwe. Lokhu kuzovimba i-SIM khadi ngokungenakuphikiswa. Lokhu kutholakala ngokusebenzisa amakhodi wokulawula obekufanele ngokuvamile afakwe ngesandla kusetshenziswa ikhiphedi yezinombolo yohlelo lokudayela.
Ukuba sengozini kuthinta isistimu yokusebenza ye- Android ye- Google kuze kufike futhi kufaka phakathi i-Ice Cream Sandwich (inguqulo 4.0.x) - isisombululo esisekwe kwisoftware senkinga ngendlela yokuvuselelwa kohlelo lokusebenza cishe akunakwenzeka kumaselula amaningi (ngenxa yenqubomgomo yokuvuselela yomkhiqizi!). Esikhundleni salokho, kufanele ushintshele ezinhlelweni ezinjenge- G Data USSD Filter , ongayithola mahhala emakethe ye-Android.